महिनावरी हुँदा पेटदुख्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? छुटराका पाउन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय – Krazy NepaL
महिनावरी हुँदा पेटदुख्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? छुटराका पाउन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
January 25, 2021 569
स्वास्थ्य जीवनका लागि सबै भन्दा ठूलो कुरा हो। जब हामी स्वस्थ हुन्छौँ, तब मात्र जीवनमा खुसी, मिल्छ, काम गर्न मन लाग्छ र जीवनलाई सफल रुपमा स्थापित गर्न सक्छौँ । तर जीवन नै सफल भएन भने हाम्रो जीवन नै असफल बनिदिन सक्छ।
हामीले सानो तिनो विरामी भयौँ भन्दैमा डाक्टरी औषधि सेवन गर्नै पर्छ भन्ने छैन्। हामीले घरेलु औषधिको सेवन गर्दा स्वास्थ राम्रो पनि हुन्छ तर सानासाना रोग पनि निको हुने गर्दछन्।
महिनावारी हुँदा पेट देख्ने समस्या आम नारीको समस्या जस्तै बनेको छ। कसैलाई दुखाइ कम र कसैलाई बढी हुने मात्र हो। महिनावारीका समयमा पेट दुख्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन तपाई हामीले हर प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ । तर पनि छुटकारा पाउन सकिरहेका हुँदैनन्। आज हामी तपाईलाई यस्तो घरेलु उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जसले महिनावारीका समयमा हुने दुखाईबाट राहत दिलाउँछ।
दुध र बेसारको सेवन
दुध स्वास्थ्यका लागि जति फाइदा जनक हुन्छ त्यति नै बेसारका पनि फाइदा छन्। दुध र बेसार मिसाएर सेवन गर्दा पाचन यन्त्र चुस्त रहनेदेखि महिनावारीमा हुने पेटको दुखाईसम्मको समस्या कम हुन सक्छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
महिनावरीमा हुने दुखाईबाट छुटकारा
बेसार भएको दुध पिउदा महिनावरीको क्रममा हुने दुखाई कम हुन्छ। बेसार र दुधमा रगत पातलो बनाउने गुण हुन्छ । साथै यसमा शरीरको विषाक्त पदार्थ प्राकृतिक तरिकाले हटाउन सक्ने गुण हुन्छ। महिनावारीका समयमा रक्तप्रवाह राम्रोसँग भयो भने पेट दुख्न कम हुन्छ। त्यसैले महिनावारीका समयमा हुने दुखाई कम गर्नका लागि दूध वेसारको सेवन निकै लाभदायिक मानिने गरिन्छ।
दूध बेसारका अन्य फाइदा
दुध र बेसार यस्तो शक्तिशाली एन्टी सेप्टिक हुन्छ, जसले पेटको अल्सरलाई समेत ठीक गर्छ । यसले पाचनलाई राम्रो बनाउँछ। अल्सर, डाइरिया र अपच हुन दिदैन।
कलेजको बिषाक्त पदार्थ हटाउँछ
दुधमा बेसार मिसाएर पिउँदा त्यसले प्राकृतिक तरिकाले कलेजोको बिषाक्त पदार्थ निकाल्छ । यसैले गर्दा रगत शुद्धिकरण पनि हुन्छ।
पाचन यन्त्र चुस्त राख्छ
दुधमा बेसार मिसाएर पिउँदा पाचन प्रणाली चुस्त रहन्छ । तर, धेरै फ्याट भएको दुध सजिलै पच्दैन ।
हड्डी बलियो बनाउँछ
बेसार र दुधको मिश्रणमा क्याल्सियम बढी हुन्छ । दैनिक यस्तो दुध पिउनाले हड्डी बलियो बनाउँछ।
क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता
बेसारमा करक्यूमिन रहेको हुन्छ। यसले क्यान्सरको कोसिका रोक्ने क्षमता राख्छ। त्यसैले दुध र बेसार पिउदा क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता पनि बढ्छ।
राम्रो निन्द्रा लाग्छ
यदि तपाईलाई अनिन्द्राको समस्या छ भने बेसार र दुध पिउनु लाभदायक हुन्छ। बेसार मिसाइएको दुधमा ट्रायटोफन हुन्छ, जसले राम्ररी निन्द्रा लगाउँछ।
Prevघरको दोस्रो लक्ष्मी अर्थात् बुहारीमा हुनुपर्ने ५ गुण
Nextयी ३ राशिका युवती हुन्छन् सबैभन्दा उत्तम, पहिलो भेटमै पुरुष हुन्छन् फिदा
सबिता भण्डारी प्रकरणबारे बल्ल DSP को ड’रलाग्दो खुलाशा, त्यो रात यस्तोसम्म भएको रहेछ
तातो पानी पिउने बानी छ एकचोटी अवश्य पढ्नुहोस् !